Kuchengeta Tab Views muGoogle Analytics | Martech Zone
Muvhuro, March 9, 2009 Douglas Karr
The Yahoo Mushandisi Yemukati Raibhurari ine yakapusa tabu kutonga iyo inokutendera iwe kushambadzira peji rimwe chete nezvirimo zvakaiswa mumatafura akawanda. Iwo masimba anoshanda kuburikidza nekushandisa runyorwa rwakaridzwa uye zvakanyatso kumakirwa divs.
kushandisa Google Analytics, zviri nyore kwazvo kuwedzera peji yekutevera nzira kune yega tebhu. Mukati mechinhu chinotsigisa pane yega runyorwa chinhu, wedzera chiitiko checlick chinowedzera peji kuona kune rakapotsa peji.
Iwe unokwanisa kugadzirisa nzira iri mukati memakotesheni asi aungade.
Kuchenesa iro peji kumusoro, ini ndaizodzvanyawo kutarisa peji kune yakasarudzika tebhu kana iro peji richivhura sezvo munhu wese ari kuzoona iyo tabu pakuvhura peji. Unogona kuita izvi ne muviri onload event kwete iyo onclick chiitiko inoshandiswa mune anchor (a) tag.
Shandisa iyo yemukati Drilldown menyu muGoogle Analytics uye iwe unogona ikozvino kuenda kune rako peji (kana kusefa kune "tabo") uye uwane yakazara kutarisa mashandisirwo uye maonero eako tabular zvemukati.
Tags: ajaxkutora zvinotungamirazvine simba mutoromafomu egiravhitiloadnhare yekuwedzera-kune-ngoro mitengonhare yekubhadhara mafonimupumburusocial bookmarkinghwindo scrollmafomu emazwi
Regedza, Kuyera uye Tarisa
Nov 15, 2011 na9:56 PM
Nov 15, 2011 na9:58 PM